08/21/14 ~ MM Daily Star
သယံဇာတ ရူး ရူးနေရင်တော့ … ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်း … ရဲတံခ...
၁၆ နှစ်သာရှိသေးပြီး ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိပ်မှု မလုပ်ထ...
Sexy ပုံစံမမြင်ဘဲ ညီမကို နားလည်ပေးကြပါ
အမှတ်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်...
စာရင်းကိုင်သင်တန်းတက်နေသူ မိန်းကလေးကို အလိုမတူဘဲေ...
မြွေမျိုးစုံသယ်လာသည့် ကားတစ်စီး အမြန်လမ်းတွင် ဖမ်း...
မြစ်ကြီးနားမြို့နေ မွတ်ဆလင်လူမျိုးတစ်စုထံမှ ဖောက်ခ...
ဆေးရုံးပေါ်တွင် ဓာတ်ဆားရည် ချိတ်ထားရင်းတန်းလန်း လိင...
မလေးရှားကို အနိုင်ယူပြီး ပွဲတိုင်း ၃ ဂိုးသွင်းသည့်...
သယံဇာတ ရူး ရူးနေရင်တော့ … ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်း … ရဲတံခွန်တို့ရွှေတို့ လုပ်ကွက်တွေ … ပြန်သာ ဖျက်ပြစ်လိုက်တော့ ….
ဘရိန်းဝပ်ရှ် ဦးနှောက်ပဲ ဆိုဆို ….
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ တွေးကြည့်တယ် ….
တိုင်းပြည်ကို အာဏာသိမ်းတာ ….
သယံဇာတတွေ ရောင်းစားပြီး …
ရတဲ့ ငွေတွေ အိတ်ထဲထည့်ချင်လို့ဆိုရင် ….
၂၂ နှစ် မလိုပါဘူး ….
ခြောက်လလောက် ဆိုရင်ကို …
တစ်ရက်ဆယ်ကြိမ် ဦးချရလောက်အောင် …
ချမ်းသာပြလို့ ရတယ် ….
အဲတော့ အဓိက ပြသနာက …
Mis management လို့ ပဲ ယူဆတယ် ….
သယံဇာတရောင်းတာ အပြစ်မဟုတ် …
ရောင်းရတဲ့ ငွေတွေကို ….
ထိရောက်စွာ စီမံ မခန့် ခွဲနိူင်တာ အပြစ်ဖြစ်တယ် ….
သယံဇာတကတော့ ရောင်းရမှာပဲ …
ကိုယ့်ဆီက ဘာထွက်ကုန်များ ….
ပြည်ပကို တင်ပို့ နိူင်နေပြီး …
နိူင်ငံခြားငွေ ဘယ်လောက်ရနေလို့…
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလဲရမယ့် …
ခရီးသွား လုပ်ငန်းလို ကဏ္ဍတွေကလဲ …
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှု အောက်မှာ …
ဗူးသီးနုနု အမွှေးသပ်ခံလိုက်ရတာ …
အားလုံး အသိပဲ ….
အပ်ကစပြီး လေယာဉ်အဆုံး …
စက်သုံးဆီ၊ ဆေးဝါးကစပြီး ဒုံးပျံအဆုံး …
ဘယ်က ပိုက်ဆံနဲ့သွင်းရမှာလဲ ….
သယံဇာတ ရူး ရူးနေရင်တော့ …
၂၀၁၅ နောက်ပိုင်း …
ရဲတံခွန်တို့ရွှေတို့ လုပ်ကွက်တွေ …
ပြန်သာ ဖျက်ပြစ်လိုက်တော့ ….
အဲ …. တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ….
သယံဇာတကို စနစ်တကျ မရောင်းခဲ့ဘူး …
ခုတ်တဲ့ သစ်တောတွေ ကျကျနန ပြန်မစိုက်ခဲ့ဘူး
ပိုပြီး အံသြစရာကောင်းတာ တစ်ခုက …
၁၉၉၀ လောက်ကနေ ....
၂၀၀၅ ၂၀၀၆ လောက်အထိ ….
မူဆယ် လမ်းကြောင်းကနေ ….
လိပ် နဲ့ မြွေကစလို့….
အင်ကြင်းကျောက် ပါ မကျန် …
တစ်ပျော်တစ်ပါးကြီး ခိုးထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေကပါ ….
တိုင်းပြည်ဆင်းရဲသွားလို့ ဆိုပြီး ….
အခု အားပါးတရထိုင်ဆဲနေကြတာ …
စစ်အစိုးရ မှာ အဓိက တာဝန်ရှိတာလဲ လက်ခံပါတယ် …
ဒါပေမယ့် ကာယကံမြောက် ….
လှီးခဲ့ ခုတ်ခဲ့ခွာခဲ့ ကျတဲ့ ကောင်တွေကျတော့ …
သူတို့ နဲ့ မဆိုင်ဘူး …
စစ်အစိုးရကိုက စီမံခန့် ခွဲမှု ညံ့ လွန်းလို့…
သား တို့ က ခိုးထုတ်ခဲ့ရတာပါ ….
ဆိုတဲ့အပေါက် လုပ်နေကြတာတော့ ….
အတော် အသည်းယားစရာ ကောင်းလှတယ် ….
ပြောရရင် ဒီတစ်ပျော်တစ်ပါး ….
တရုတ်ကို အလှူပေးကြတဲ့ အထဲမှာ ….
အခု ပစ် / ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေလဲ ပါတယ် ….
လူပေါင်းစုံ အလွှာစုံ .....
သာမန်ပြည်သူတွေလဲ ပါကြတာပဲ ….
ရက်စုတ်ယုတ်မာသော အာဏာရှင် စစ်အစိုးရကား …
တိုင်းပြည်၏ သယံဇာတတို့ ကို ရောင်းစားလေကြကုန်ပြီ ….
ဘာညာ အလုံးကြီးတွေ အော်နေတာ ….
အာ့မျိုးကျတော့ တစ်ခွန်းမှ မဟ ….
သောက်မျက်စိက ကန်းပြီး …
သောက်ပါးစပ်က ပိတ်နေကြတယ် ….
ကိုယ်က ဒါမျိုးတွေလဲ ရှိခဲ့ကြောင်း …
မနေနိူင် မထိုင်နိူင် ၀င်ပြောမိတော့ …
အဘဘောမ စစ်ခွေး အရိုးအရင်းကိုက်…
မဟုတ်တာတွေ လုပ်ခဲ့လို့…
နောက်ကြောင်းပြန် အရေးမယူရ လို့ရေးထားတာပေါ့ ….
မရှက်ဘူးလား ဟိုဒင်းမဖြစ်ဘူးလား နဲ့....
ဒီ ဆီသည်မ လက်သုတ်ဖတ်ပဲ …
လာလာ ရွတ်ပြနေကြတယ် …
နောက်ကြောင်းပြန် ကိစ္စ ….
ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ စာမျက်နှာ ၁၇၈ …
ပုဒ်မ ၄၄၅ သေချာပြန်ဖတ်ကြည့် …
န၀တ ၊ နယက အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး သို့ မဟုတ် …
အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးရဲ့…
တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ် …….
၎င်းတို့ အား တရားစွဲခြင်း …
အရေးယူခြင်းမပြုရ တဲ့…..
တာဝန်အရ ဆိုတဲ့စကားလုံး …
အရှေ့ မှာ ပါနေတယ် ….
သူ့ ယုံကြည်ချက် အငြင်းပွားနိူင်တဲ့….
နိူင်ငံရေး အရ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပဲ ….
လာဘ်စားတာ အလွဲသုံးစား လုပ်တာ ….
ဒါတွေကို ဘာမှ မကာကွယ်ထားဘူး ….
နောက်ကြောင်းပြန် အရေးမယူရ မို့ လို့…
မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ခပ်ပိန်းပိန်းအော်နေမယ့် အစား….
ကွကို အထောက်အထားလေးတွေ ရှာ …
နောက်အစိုးရ လက်ထက် ….
အမှုဖွင့်ဖို့ လုပ် ….
ဒီလောက် နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်နေတာတောင် ...
အဘဘောမ အရိုးအရင်းကိုက် ....
လာစွပ်စွဲတဲ့ သူက ရှိသေးတယ် ......
သေချာ စဉ်းစားကြည့်ရင် …
အဖြေက ထွက်နေပြီ …
ဟိုဘက်က တော်တယ်ဆိုတာထက် ….
မင်းတို့ ကကို ပိန်းလွန်းခဲ့တာ …. ။ ။
၁၆ နှစ်သာရှိသေးပြီး ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိပ်မှု မလုပ်ထားကြောင်းဆိုတဲ့ နောက်ထပ် လူသားဘာဘီ တစ်ယောက်ပေါ်ထွက်
16:00 ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
Ukarine နိုင်ငံ Kiev မြို့က အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် Lolita Richi ဟာ သူမရဲ့အသွင်အပြင်ကို mattelရုပ်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပုံတူပွားဖြစ်အောင် ပြောင်းလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးလူသား ဘာဘီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အရင်ကတော့ Alina Kovalevskaya နဲ့ Valeria Lukyanov တို့က အလားတူလုပ်ရပ်မျိုး လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Lolita ရဲ့အသွင်အပြင်ကူးပြောင်းမှုက မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ ထိပ်လန့်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူမမှာ လက်မ ၂၀ ရှိတဲ့ ခါးနဲ့ အလွန်တရာကြီးမားနေတဲ့ ရင်သားတွေရှိတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးဘာဘီစံပြပုံစံအသွင်အပြင်ရဖို့အတွက် ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိပ်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက် ယူကရိန်းကောင်မလေးကတော့ ခွဲစိပ်မှုတွေ၊ အစာလျော့စားမှုတွေနဲ့၊ photoshop (ဓာတ်ပုံဖြတ်ညှပ်ကပ်) တွေမပြုလုပ်ထားဘူးလို့ အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။
‘ကျွန်မ အခြားသူတွေ ထက်ပိုကောင်းတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ရနေပြီလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ကျွန်မက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးသူပါ။ Valerua Lukyanove (အခြားနာမည်ကြီး လူသားဘာဘီ) ကို ကျွန်မကြားတောင်မကြားဖူးပါဘူး’ လို့ပြောပါတယ်။
သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စေ့ဆော်မှုကို မေးတဲ့အခါမှာတော့ သူမက ပြီးပြည့်စုံတဲ့အသွင်အပြင်ရှိချင်ပြီး အမျိုးသမီးတွေအားလုံး ဒါကိုလိုချင်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်လေးတွေဆီကလာတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြောပြတဲ့အခါမှာလည်း Lolita တစ်ယောက်ရှက်ကြောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ဘယ်သူကမှ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။
‘လူတွေက သူတို့ကျွန်မကို ဘယ်လို မနာလိုဖြစ်တာနဲ့ ကျွန်မဘယ်လို လှပတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြတယ်။ ကျောင်းကကောင်လေးတွေအားလုံး ကျွန်မကိုကြိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မသူတို့ထဲက တစ်ယောက်ကိုမှ မကြိုက်ဘူး။ သူတို့က ကျွန်မစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူးလေ’ လို့ ပြောပါတယ်။
15:00 အနုပညာလောက သတင်း 1 comment
မေထွဋ်ခေါင်အနေဖြင့် နာမည်ကြီးချင်သည့်အတွက် ယခုလို
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးနှင့် မကိုက်ညီသော အ၀တ်စားမျိုးကို
၀တ်ဆင်ရခြင်းမဟုတ်ဘဲ အနုပညာတစ်ခုကို ဖော်ပြသည့်အနေဖြင့်သာ
၀တ်ဆင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု ရှင်ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာဖြစ်သူ
မစောရတီနိုင်က စံတော်ချိန်သို့ပြောဆိုသည်။ သြဂုတ် ၁၄ ရက်ထုတ်
ရှင်အနုပညာဂျာနယ်တွင် မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည့် မေထွဋ်ခေါင်က
၀တ်စားဆင်ယင်မှုအပိုင်းတွင် ပရိသတ်အမြင်အရ မသင့်တော်သော
'အစ်မတို့အနေနဲ့ ဒီအပတ်ထုတ်ကာဗာမှာ သူနဲ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါ
သူနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အ၀တ်စားပုံစံတွေကို အစ်မသွားကြည့်တယ်။ အစ်မ
စဉ်းစားတာ တစ်ခုကတော့ သူကအစတည်းက ယောကျာ်းလေးဆန်တဲ့
ဖက်ရှင်မျိုးတို့၊ ဇာတ်ကားတွေမှာဆိုလည်း ဖိုက်တင်ကားတို့၊ နန်းတွင်းကား
တွေလို ရိုက်တာများတော့ သူ့အနေနဲ့လည်း ပရိသတ်အမြင်ဆန်းသွား
အောင် ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။ သူ့ကိုလည်း အစ်မကဒီပုံစံလေးကို ပြတယ်။
အဲဒါနဲ့ သူနဲ့လည်းလိုက်မယ်ထင်တယ်။ ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျ
တော့ Creation ယူထားတာလေးကလည်း အရမ်းလှတယ်။ အဲဒီအခါကျ
တော့ သူလည်းသဘောတူတယ် အဲဒါနဲ့ပဲ ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ 'ဟု ၎င်းက
ပုံဖော်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းင်းအတွက်လိုအပ်မည့် အနုပညာဖန်တီးမှုများ
စွာလည်း ဖန်တီးထားရသည်ဖြစ်ကာ ဆန်းသစ်သည့်ဖက်ရှင်တစ်ခု အဖြစ်
သာ ပုံဖော်ထားရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ယခုခေတ်အရ ရိုက်ကူး
နေသော ဖက်ရှင်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် Sexy ပုံစံရိုက်ကူးသည့်အမြင်မျိုး
အဆိုပါ ဂျာနယ်အတွက်မျက်နှာဖုံးကာဗာကို ရိုက်ကူးပေးခဲ့သော
မင်းသမီးမေထွဋ်ခေါင်မှာလည်း 'ညီမပုံအဲဒီလောက်ကြီး ဖြစ်သွားမယ်လို့
ညီမ မထင်ထားမိပါဘူး။ ညီမအနေနဲ့ နာမည်ကြီးချင်လို့ ဒီလိုမျိုးတွေရိုက်
တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဖန်တီးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံမျိုးပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညီမဘာမှတော့
မပြောချင်ဘူး။ ညီမဖန်တီးမှုကိုနားလည်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ'ဟု
အမှတ်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထုတ် ပြန်ထားသော ဒေသစရိတ်ခံစား ခွင့်ရှိသည့် လူမှုရေးခက်ခဲသော ဒေသများမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ယခုနှစ်ပညာသင်နှစ် အတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ကို အမှတ်ကန့်သတ်ချက်မရှိ ဘဲ ၀င်ရောက်လျှောက်ထားနိုင် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အ မှတ်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ သော်လည်း ရောက်ရှိလာသည့် လျှောက်လွှာများ အပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ (၆)ခုဖြစ်သည့် နာဂ၊ ဓနု၊ ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ ၀နှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဒေသစရိတ် ခံစားခွင့်ရှိသည့် သွားလာရေးနှင့် လူမှုရေးခက်ခဲသော ဒေသများမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများလျှောက်ထားနိုင်သည် ဟု သိရသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် လျှောက်ထားလိုသူများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို သိပ္ပံဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက် ထားသူနှင့် မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည် တည်ဆဲနိုင်ငံသား ပြစ်မှုဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒေသတွင် အခြေခံပညာ (၈ တန်း၊ ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်း)ဆက်တိုက်ပညာသင် ကြားခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို အဆိုပါဒေသများမှ အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည် ဖြစ် သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်ရမှတ်စာရင်း မူရင်း တစ်စောင်၊ ၎င်းဒေသရှိ ကျောင်း၌ သုံးနှစ်ဆက်တိုက်တက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအား ၎င်းဒေသရှိ စာစစ်ဌာနမှ အောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ ထောက်ခံချက်နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတို့၏ ထောက်ခံချက်၊ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း မိတ္တူနှင့် ၎င်းဒေသတွင် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်များ၏ ထောက်ခံချက်၊ ဘွဲ့ရရှိပြီးပါက မိမိဒေသတွင် ငါးနှစ်မပျက်မကွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု ကတိပြုဝန်ခံချက်စသည်တို့ကို ပူးတွဲ၍ စက် တင်ဘာ ၃၀ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး ဆေးသိပ္ပံပညာဦးစီးဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ လျှောက်ထားရ မည် ဖြစ်သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်မရ ရှိခဲ့ပါက တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စိစစ် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ကြေညာ သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်း အတိုင်း ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာအိတ် ဖြင့် အခြားတက္ကသိုလ်များသို့ လည်း ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
အသေးစိတ် အချက်အ လက်များ သိလိုပါက ဆေးသိပ္ပံ ပညာဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၃၉ နှင့် ၀၆၇-၄၁၁၁၄၈၊ ၄၁၁၁၄၉၊ လိုင်းခွဲ (၈၂၁) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက် သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
စာရင်းကိုင်သင်တန်းတက်နေသူ မိန်းကလေးကို အလိုမတူဘဲ နေ့စဉ် မုဒိန်းကျင့်ပြီး လိင်ကျွန်အဖြစ်ခိုင်းစေသူအား အရေးယူ
13:00 မုဒိန်း မှုများ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနောက်ယော့ရှိုင်းယားပြည်နယ် ဘရက်ဖို့ဒ်မြို့မှ အသက် ၃၀ အရွယ် အဒူဟာနစ်ဆိုသူ သည် လန်ဒန်မြို့တွင် စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်း တက်နေသူ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး အား ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီး လိင်ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခဲ့မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်အလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဟာနစ်သည် အဆိုပါ မိန်းကလေးအား သူမအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် လန်ဒန်မြို့ရှိ အသားညှပ်မုန့်ဆိုင် တစ်ဆိုင် တွင် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နီးစပ်အောင် ချည်းကပ်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့လာသူ အဆိုပါ မိန်းကလေးက မိမိတွင် နေထိုင်ရန် အိမ်မရှိကြောင်း ပြောသည့်အခါ အိမ်အသစ်တစ်လုံး စီစဉ်ပေးမည် ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ဟာနစ်သည် ၎င်း၏ ကားအတွင်း မိန်းကလေးနှင့် ရက်အတော်ကြာ အိပ်ခဲ့ကြပြီး ဘရက်ဖို့၏ မြို့တွင် အခန်းမငှားခင် သူငယ် ချင်းများ၏ အခန်းများတွင်လည်း လှည့်လည်နေထိုင်ခဲ့သည်။
ဘရက်ဖို့ဒ်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ ဟာနစ်က မိန်းကလေး၏ ဈေးဝယ်ကဒ်များနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းမျာကို သိမ်းယူထားပြီး အကျဉ်းသားတစ်ဦးကဲ့သို့ ဆက်ဆံကာ အလိုမတူဘဲ နေ့စဉ် သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့သည်။
သူမအား ပိတ်လှောင်ထားပြီး အိမ်သန့်ရှင်းရေးများလုပ်ဆောင်စေခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မလိင် ဆက် ဆံခြင်းနှင့် မိမိက ပေးရန်ရှိ သည့် လောင်းကစားအကြွေးများအတွက် အဆိုပါ မိန်းကလေးကို အခြား သူများနှင့် ဆက်ဆံစေခြင်းတို့ကို စေခိုင်းခဲ့သည်။ မိန်းကလေးက ငြင်းဆန်သည့် အခါ များတွင် ဖုန်းအားသွင်းကြိုးဖြင့် လည်ပင်ကိုညှစ်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း မိန်းကလေးက တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
မိန်းကလေးက ဟာနစ်၏ သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည့် စတီဖင်နေလာဆို သူအား ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံနေရကြောင်းကို ပြောဆိုရာမှ ရဲများထံအကြောင်းကြားပြီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟာနစ်သည် အဆိုပါ မိန်းကလေးကို လေးလကြာ လိင်ကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းခဲ့ပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ဗလက္ကာရ ပြုကျင့်မှု၊ ရိုက်နှက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုဖြင့် ဘရက် ဖို့ဒ်တရားရုံးက ယခုကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအမှုအား စီရင်ချက်ချသူ တရားသူကြီး ပီတာဘင်ဆန်က “ဒီမိန်ကလေးငယ်ဟာ လန်ဒန်မှာ မိသားစုလည်းမရှိပါဘူး။ အသိအကျွမ်းလည်း အနည်းငယ် သာရှိပြီး သူ့ခြေထောက်ပေါ် သူရပ်တည်နေရတာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
တရားရုံးသို့ မိန်းကလေး၏ ထွက်ဆိုချက်တွင် “ကျွန်မဘ၀ဟာ အဒူဟာနစ်ကြောင့် လုံးဝကို ပြိုလဲ ပျက်စီးသွားပါပြီ။ ဘ၀မှာ အရာရာတိုင်း ဟာ ပြောင်း လဲသွားပြီ။ အရင်ကလည်း မပြုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘယ်ကိုမှလည်း မသွားနိုင်တော့ပါဘူး” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟာနစ်၏ နှိပ်စက်မှုများကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု၊ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်ဆိုးများက ခြောက်လှန့်နေမှုနှင့် မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန် စိတ်ကူး များအား ဖြေဖျောက်နိုင်ရန် မိန်းကလေးအနေ ဖြင့် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ဆွေးနွေးမှုများ ရရှိရန် လိုအပ်နေကြောင်း တရားရုံးက အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့ သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော မြွေထည့်ထားသည့် အိတ်များကိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ရဲဇာနည်)
‘‘မြွေတွေကို အ်ိတ်တွေထဲ ထည့်ထားတာ သေတဲ့အကောင် လည်းသေဆိုတော့ သေချာစစ်ဆေးပြီး ရန်ကုန်က အဖွဲ့တွေဆီအကြောင်းကြားပြီး ဒီနေ့ပဲ လွှဲပေးဖို့ စာရင်းလုပ်နေတယ်။ တစ်အိတ်ကို ငါးပိဿာဆီရှိတဲ့ ၂၂ အိတ်ဆိုတော့ ရှင်တဲ့အကောင်ရေကို တွက်နေကြတယ်’’ ဟု နေပြည်တော်တိုးဂိတ်မှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သုံးဦးအား ပလွေးအမြန်လမ်းရဲစခန်းမှ တော ရိုင်းတိရစ္ဆာန်၊ သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ် မြေများ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ (က)ဖြင့် ဆေးဝါးစက်ရုံ မှ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်ရန် တစ် ကောင်လျှင် ငါးဆယ်ကျပ်သား အထက်ရှိသော မြွေပွေးနှင့် မြွေ ဟောက်တစ်ကောင်လျှင် ကျပ် သုံးထောင်ဖြင့် ၀ယ်ယူရန် သြ ဂုတ် ၇ ရက်က နိုင်ငံပိုင်သတင်း စာများတွင် ကြေညာထားသည်။
ယခု မြွေများမှာ ရန်ကုန်မှ မန္တလေး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် တရုတ် နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖမ်းဆီးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး က ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့နေ မွတ်ဆလင်လူမျိုးတစ်စုထံမှ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
10:00 ဘင်္ဂလီ များ, ဘင်္ဂလီ အရှုပ်တော်ပုံများ, သတင်း No comments
၂၀၁၄ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက်၊ မန္တလေးကျောင်းအနီး ဓါတ်ဆီဆိုင်မှ ဟာဆင်ဦးဆောင်သည့် မွတ်ဆလင်လူမျိုးတစ်စုက တရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှတဆင့် ဗန်းမော်မြို့သို့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ သယ်ဆောင်လာကြောင်း သတင်းရသဖြင့် လိုက်လံစုံစမ်းရာ သစ်ခွနက်၊ ခေါင်းလိမ်းဆီမွှေး ဖြန့်ချီသောကားဖြင့် တင်ဆောင်လာကြောင်း ထပ်မံသိရှိရသဖြင့် လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ မွတ်ဆလင်လူမျိုး ဟာဆင်ဆိုသူမှာ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် နောင်တာလောကျေးရွာအရောက်တွင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သည့်အတွက် ၄င်းဟာဆင်ဆိုသူ၏ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ မဖြူနှင့် မိသားစုဝင်များအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိသည်။
၄င်းဟာဆင်နှင့် ဆက်စပ်ပက်သက်သူ မွတ်ဆလင်လူမျိုး သစ်ခွနက်၊ ခေါင်းလိမ်းဆီကားမောင်းသူနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အောင်နန်းရပ်ကွက်နေသူ မွတ်ဆလင်လူမျိုး သုံးဦးအပါဝင် လက်နက်ရောင်းဝယ်သူ ငါးဦးကို (16.8.2014)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့မှ လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သော်လည်း အဓိကတရားခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဟာဆင်မှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက်၊ မန္တလေးကျောင်းအနီး ဓါတ်ဆီဆိုင်မှ ဟာဆင်ဆိုသူသည် ဖားကန့် ယမ်းစက်ရုံနှင့် (4 in 1) ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ဦးကျော်မြင့်၏ တပည့်ဘ၀ဖြင့် ဖားကန့်မှ တရုတ်ပြည်သို့ ကျောက်ကယ်ရီကူးရင်း အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး၊ ၄င်းဟာဆင်နှင့် ဆက်နွယ်သော လက်နက်ရောင်းဝယ်သူ မွတ်ဆလင်လူမျိုး ငါးဦးမှာလည်း မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပြီး ၄င်းဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို မန္တလေးသို့ တင်ဆောင်ရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများမှ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါသည်။
ဆေးရုံးပေါ်တွင် ဓာတ်ဆားရည် ချိတ်ထားရင်းတန်းလန်း လိင်ဆက်ဆံကာ Facebook ပေါ်တင်သည့် အမျိုးသမီး တရားဆွဲခံရနိုင်
09:00 သတင်း, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
ထိုင်းနိုင်ငံရှိအသက် ၂၂ အရွယ်အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆေးရုံတတ်နေစဉ်အတွင်း လက် မှာလည်း ဓါတ်ဆားရည် ချိတ်ထားရင်း တန်းလန်းဖြင့် လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ ဓါတ်ပုံကို မိမိဖေ့ဘွတ် ရှိစာမျက်နှာမှာတင်ပြီး ဆေးရုံကဆင်းလာပါပြီ။
"ဝါသနာပါလျှင် VIP chat box မှာဝင်ပြီး ဗီဒီယိုကြည့်နိုင်ပါကြောင်း အမှန်ကန်နော် လိမ်တာဟုတ်ဖူး အခြားသူများလည်းကြည့်လို့ရအောင် ရှယ်ပေးနိုင်ပါကြောင်း" ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့ status နှင့်ပါတ်သတ်ရ်ျထိုင်းနိုင်ငံသတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်၊၊
အမျိုးသမီးကတော့ သားအိမ်ခေါင်းနာလို့ ဆေးရုံတတ်ကုသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံဘက်ကလည်း မိမိတို့ ဆေးရုံကို ဂုဏ်သရေနဲ့နာမည်ပျက်စေတဲ့အတွက် အဲဒီအမျိုးသမီးကို တရားစွဲမည်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းထွက်နေပါတယ်၊၊
မလေးရှားကို အနိုင်ယူပြီး ပွဲတိုင်း ၃ ဂိုးသွင်းသည့် စံချိန်နှင့် မြန်မာအသင်း ဗိုလ်လုပွဲတက်ပြီ
08:00 အားကစား ဘောလုံး No comments
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၌ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော မြန်မာ ယူ ၁၉ အသင်းနှင့် မလေးရှား ယူ ၂၁ အသင်းတို့၏ ဘရူနိုင်း ဘုရင့်ဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲစဉ်တွင် မြန်မာအသင်းက ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ယူ ပြီး ဗိုလ်လုပွဲသို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန်
မြန်မာအသင်းသည် မလေးရှား အသင်းအပေါ် ကစားကွက်အသာ ခြေအသာ ဖြင့် ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး
ပထမပိုင်းတွင် သွင်းယူသော သွင်းဂိုး ၃ ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာအသင်းသည်
အုပ်စုပွဲ ၄ ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာတွင်လည်း ပြိုင်ဘက်အသင်းတိုင်းကို ၃ ဂိုးသွင်းပြီး အနိုင်ယူခဲ့သည်။
ယနေ့ အကြိုဗိုလ်လုပွဲတွင်လည်း မလေးရှားကို ၃ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိပြီး ပွဲတိုင်း ၃ ဂိုးသွင်းသည့် စံချိန်ကို
ဆက်ထိန်းနိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းသည် ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ်ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်အသင်းတို့မှ အနိုင်ရသည့် အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဗိုလ်လုပွဲကို (၂၃-၈-၂၀၁၄) ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ည (၈း၃၀) မြန်မာစံတော်ချိန် ည (၇) နာရီတွင် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းပွဲစဉ်ကိုလည်း MRTV မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသသွားမည်